Emulator waa barnaamij software taas oo ka dhigaysa mid hardware in ay u dhaqmaan sidii midba midka kale ah. Emulator waxa uu ka dhigayaa mid hardware (caadi ahaan loo yaqaan ciidan) si ay u dhaqmaan sidii midba midka kale (oo loo yaqaan martida ah). Xaaladdan oo kale, oo ciidankii ka dhigaysa isticmaalka software markii hore loogu talagalay .Waxaa emulator martida loo isticmaalo marka loo baahdo in la isticmaalo qalabka si gaar ah u ciyaaro software loogu tala galay hardware kale. Tusaale ahaan, ee isticmaala Mac, aan kulamo badan ayaa diyaar u ah OS Mac ah, laakiin, iyadoo la isticmaalayo emulator ah ka badan kulan badan lagu ciyaari karo Mac. Dabacsanaanta ee emulators siiyey kor u tiro ka mid ah Softwares oo lagu ciyaari karo on.
PC Virtual u Mac
Software Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad u ordaan software Windows aad Mac iyo aad siinaysaa xoriyad ay ku wadaan barnaamijyo si gaar ah loogu tala galay Windows OS. Tani waxay ka caawisaa user computer ka haysta labo mashiin oo kala duwan oo socda laba OS kala duwan ama xataa si buuxda u beddelo OS ah. Sidaas, user ka badbaadiyay lacag iyo waqti. User ayaa isticmaali kartaa Microsoft virtul PC for Mac 7.0.
Emulator Madaxweyne Siilaanyo u Mac
Wixii ciyaaro Madaxweyne Siilaanyo, emulator ugu balaadhan looga isticmaalaa waa emulator XeMu360. Tani waa software cusub oo ay taageerto oo dhan kulan Madaxweyne Siilaanyo. Tani waa emulator awood leh oo ku siin kara oo farxad u ah ku riyaaqayaa aad ciyaarta flawlessly.
PCSX-Reloaded waa emulator ugu fiican kulan Playstation. Emulator Tani waa il software furan oo ku siinayaa waafaqid oo dhan Mac OS. Dhawaan waxa uu modified habka loo xirxiro ay sidoo, samaynta habka fudud oo fudud. Waad haysan kartaa ciyaaraha oo dhan Playstation aad galka iyo ka dib rakibidda PCSX-Reloaded aad jiidi karaan jeedi ciyaarta oo uu u ciyaaro. Waxay leedahay BIOS ka dhisay-in oo awood u leh inay wax ka bedel kaararka xusuusta.
Nintendo 64 Emulator u Mac
Mupen64 waa emulator ugu caansan u Nintendo 64 .Taasi waa ay fog emulator ugu xasilloon oo socon. Tani waa fur cross-boosteejo ah oo ku ku salaysan N64 emulator kaas oo ka ciyaari kara ayaa inta badan kulamada si sax ah. Si kastaba ha ahaatee, user waa rakibi + GTK ah emulator in ay si fiican u shaqeeyaan. GTK + xidhmo war ah oo garaafyada caawisaa baaraandegidda naqshadeynta ah. Waxaa sii joogo ee asalka ah iyo waxay maamushaa naqshadeynta ee ROMS N64 ah.
GameCube iyo Wii kulan emulator u Mac
By fog, hoomboro waa emulator ugu fiican kulan kulan GameCube, Wii iyo Triforce. Waxaa la socon kara dhufto ee kala duwan oo ay ku jiraan Mac. Faa'iidada kale waa waa il furan oo xor ah u use.For Mac, waxaa u shaqeeya OS 10.6 inay 10.8 oo waa user saaxiibtinimo. User ayaa laga yaabaa in ay u isticmaalaan file u gaar ah BIOS oo had iyo jeer la iman ROM ah. Marka aad bilowdo ciyaareed, hoomboro si toos ah u eegtaa file oo u ciyaaro bilaabo.
OpenEmu waa mid ka mid ah haddii emulator ugu kalsoonaan karo u Mac OS 10.7 iyo kor. Waxaa aad user saaxiibtinimo oo uu leeyahay ayaa ah nooca menu Lugood. Tani waa mid ka emulator oo waxay dareemi karaan iskala qaybqaybin iyo iyaga lagu ogaado sida looga baahan yahay.
Illaa iyo hadda, OpenEmu taageertaa tiro ka mid ah consoles'ka; yar la tiriyey hoos ku qoran:
Sega Genesis iyo dad badan oo dheeraad ah
Waa emulator ah oo dhan-in-ka mid ah taas oo kaa caawin kara user ay ku ciyaaraan inta badan kulan kasta oo Retro. Waxaa ka ciyaari kara Playstation 1 iyo kulan ka weyn iyo in Console ciyaarta Xararad ay taageerto kulan Game Boy Advance. Waxay ku salaysan tahay Tuulo la core kasta inuu noqdo Console ah.
Playstation Qabille oo la qaadan karo ku habboon ciyaaro Portably waa emulator ah u ciyaaro PSP. Waxa la abuuray by horumarinta hoomboro oo si weyn loo isticmaalo. Waa fududahay in la rakibo iyo sida loo isticmaalo. Waxa ay taageertaa tiro badan oo ah kulan PSP.
Tani waxay la mid tahay kuwa isticmaala oo Cunid ciyaaro kulamada dhibic-iyo-click. Tan waxaa loogu talogalay gaar ahaan iyaga loogu talagalay. Waxaa la magacaabay oo kale, sababtoo ah waxa uu u adeegsanayaa af scripting Scumm. Waxa ay taageertaa kulan badan u quudhin sida Daanyeer Island 1-3, Sam & Max iyo qaar badan.
Waxay ka caawisaa dadka isticmaala ay ku ciyaaraan la screens labo Nintendo, simulating screen dual ilaaliye ah. Waxa kale oo ay taageertaa in kulan ciyaaro ay hindiseen dhinac. Waxaa la joogto ah ee ay ku dhiirigelinayaan ku daray qaababka cusub in ay si joogto ah oo ku dhawaad ​​muddo dheer. Muddo sanado ah, waxa uu isku bedelay barnaamij hufan.
Tan waxaa loo sameeyey si ay barnaamijyo ku salaysan DOS. Waxaa jira kulan DOS ku salaysan badan oo weli ku jira arrin caan ah oo ka mid ah dadka isticmaala. Sidaas si ay u sameeyaan kuwa la heli karo, emulator waxa loo qorsheeyay. Kuwa All kulan DOS ku salaysan oo lagu hayaa aan la isticmaalin waxaa la siin karaa isku day ah oo la isticmaalayo emulator this.
Xamarian Android Player for Mac
Tani waa emulator kale Android oo taageera noocyo kala duwan oo qalab. Waxa ay taageertaa OpenGL iyo virtualizes qalab halkii ay si fudud u noqdo. Habkan, waxay si aad ah kor u qabadka qalabka. Xamarin Android Player ayaa is-dhexgalka weyn leh Studio Visual iyo Xamarin Studio oo waa interface user hooyo.
PS3 Emulator u Mac
Emulator PS3 waa qarni emulator soo socda kaas oo u ogolaanaya user ay ku ciyaaraan Palystation 3 kulan oo gabi ahaanba bilaash ah. Oo siinayaa user xoriyadda dhameystiran in ay doortaan kulan PS3 iyo ciyaaro kuwa uu Mac ama PC.
Ma ahan wax sahlan in uu ordo codsiga iPad ah oo ku saabsan Mac ah. Xalka ugu wanaagsan waa inaad kala soo baxdo Qabille oo ah, kuwaas oo kaa caawin kara user ay u isticmaalaan codsiyada iPad on Mac ah. Mid ka mid Thebest in haatan waxaa laga heli karaa waxa loo yaqaan iPadian. Tani waxay ku salaysan tahay Adobe AIR iyo iPad style interface on Mac u abuuraa. Tani waa Qabille oo aad u wanaagsan, taas oo ka dhigi kartaa codsiyada iPad si loo eego ku dhowaad la midka ah ee Mac ah.
Visual Buy Advance waxaa sidoo kale loo yaqaano Mac Boy horay u ciyaaraa inta badan kulan ee consoles'ka Nintendo. GBA Tani waxaa si gaar ah loo qoray in OS X iyo waxa uu shahaadada aad u dheer of waafaqsan.
> Resource > Emulator > The Best Game tacsiyeeyaan Emulators on Mac OS